Ankasina – 67 ha : nijoalajoala ny afo, trano ampolony maro kila | NewsMada
Ankasina – 67 ha : nijoalajoala ny afo, trano ampolony maro kila
Par Taratra sur 18/04/2016
Trano ampolony maro indray kilan’ny afo, omaly tolakandro teny Ankasina – 67 ha. Tsy fantatra mazava ny nahatonga ny firehetana. Fianakaviana maro no traboina tsy manan-kialofana. Zaza amam-behivavy ny ankamaroan’ireo.
Tsy nifankahitana ny setroka nandritra ny haintrano teny Ankasina – 67 ha, omaly tamin’ny 2 ora sy 30 mn tolakandro. Fifanjevoana, horakoraka, ranomaso… santionany amin’ny zava-nitranga niainan’ireo niharam-boina eny Ankasina, omaly izany. Trano miisa 20 mahery indray kila hotohoton’ny afo. Trano biriky sy trano hazo ireto kilan’ny afo ireto, raha ny fahitana azy teny an-toerana. Araka ny fanazavan’ireo nahita ny fitrangan’ny loza, afon-tsaribao tao amin’ny tokantrano iray no nitarika ny firehetana ka niitatra tamin’ireo trano manodidina. « Afon-tsaribao nirehitra tao amin’ny trano iray no nahatonga ny firehetana. Nijoalajoala avy hatrany ny afo taorian’izay ka niitatra tamin’ireo trano manodidina ka tsy voafehy intsony », hoy ny fanazavan’ny raim-pianakaviana iray, isan’ireo niharam-boina. Vetivety ny fiitarany, noho ny fitsokan’ny rivotra ka vao mainka nampijoalajoala ny afo. Ireo fokonolona teny an-toerana no nifanome tanana tamin’ny famonoana ny afo mialoha ny fahatongavan’ny mpamonjy voina. Nanano sarotra ny famonoana ho an’ny mpamonjy voina rahateo ny famonoana ny afo noho izy anaty tanàna.
Nanararaotra ny mpangalatra…
Ramatoabe iray torana tampoka raha nahita ny tranony nirehitra. Na teo aza izany, tsy nisy kosa ny aina nafoy fa levon’ny afo avokoa ny ankamaroan’ny entana rehetra. Araka ny vinavinan’ireo niharam-boina, mitentina antapitrisany maro ny tentimbin’ny entana lasa lavenona tamin’ity haintrano ity. Misy hatrany anefa ireo manararaotra ny fahavoazan’ny hafa rehefa misy voina mihatra toy izao. Nangalarin’ny mpangalatra indray ireo entan’ireo niharam-boina sasany. Nitangorona rahateo ny olona ka tsy voafehy intsony.
Tonga nankahery ireo traboina ny Filoha Rajaonarimampianina
Fianakaviana anjatony, araka izany, no traboina vokatr’ity haintrano ity. Tsy niandry ela fa tonga nankahery sy nitondra fanampiana ho an’ireo traboina ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, omaly hariva raha vantany vao nandre ity voina ity. Nametraka trano lay ho an’ireo traboina ny teo anivon’ny Birao mahaleo tena misahana ny loza voajanahary sy ny minisiteran’ny Mponina.
Nahazo vahana tato ho ato ny haintrano. Tokony hitandrina hatrany ny tsirairay satria tandrevaka kely fotsiny dia mety hamoizana aina sy ny fananana noharina an-taony maro.
Les journaux Les Nouvelles et Taratra du 15 janvier 2022 15/01/2022